Sawirro laga soo qaaday Hotel-ka ay dagi doonto kooxda Real Madrid final-ka Champions League - Hablaha Media Network
Sawirro laga soo qaaday Hotel-ka ay dagi doonto kooxda Real Madrid final-ka Champions League
HMN:-Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee dalka Spain ayaa kama dambaysta koobka horyaallada Yurub ku ciyaari doonta magaalada Cardiff ee caasimadda Wales, waxaana ay madaxa gelin doonaan naadiga reer Talyaani ee Juventus.
Sawirro ayaa laga soo qaaday Hotel-ka ay magaalada Cardiff ka dagi doonto kooxda Real Madrid waxaana la warinayaa inay degi doonaan Hotel habeenkii lagu seexdo 69 bound.
Hotel-kan oo lagu magacaabo Mercure Cardiff Holland House Hotel and Spa ayaa waxa uu ku yaalaa meel aan ka fogeyn garoonka Principality Stadium.
Waxaa Hotel-kan u dhammaystiran wax waliba oo ay u baahan yihiin xiddigaha Real Madrid sida Barkadaha lagu dabaasho, qolalka Jimicsiga, goobo bilicsan oo loogu talo galay in cuntada lagu cuno isla markaana lagu nasto IWM.
Kooxaha Juventus iyo Real Madrid oo ku soo guuleystay horyaallada dalalkooda ayaa Sabtida wada ciyaari doona final-ka Champions League, kooxdii ku guuleysata koobkan ayaana noqon doonta kooxda ugu fiican Yurub.